Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): တရားမ၀င်ရောင်းချတဲ့ ကချင်မြေမှသယံဇာတ
at 3/05/2017 08:29:00 AM
ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲတွေဟာ ကချင်ဒေသမှာထွက်နေတဲ့ ကျောက်စိမ်းနဲ့ အခြားသယံဇာတ ထုတ်ယူသုံးစွဲရေး ကိစ္စတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေပြီး၊ ဖားကန့်ဒေသမှာ ကျောက်စိမ်းတူးဖေါ်ခွင့်ကို တရားဝင် ခွင့်ပြုထားပေမယ့် ကျောက်တူးဖေါ်ရေး ကုမ္ပဏီတွေဟာ မှောင်ခိုလမ်းကြောင်းကတဆင့် တရုတ်နယ်စပ်ဖက်မှာ ရောင်းဝယ်မှုတွေ လုပ်နေတယ်လို့ ဒေသတွင်း သယံဇာတထုတ်ယူသုံးစွဲမှု စောင့်ကြည့်နေတဲ့ KDNG ကချင်လူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ကွန်ယက်က ကိုဆာဂျီးက ပြောပါတယ်။ ကချင်ဒေသက သယံဇာတတွေကို အလွန်အကျွံ ထုတ်ယူနေပေမယ့် ဒေသခံတွေ အကျိုးခံစားခွင့် မရှိဘူးလို့ သူကပြောဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ဖို့ အမေရိကန်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ ခရီးစဉ်အတွင်း ကိုဆာဂျီးက ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ ကိုဆာဂျီးကို VOA ရုံးချုပ်မှာ ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က သီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနမှာ ...
US,State Department hte Kachin Datkasa ni Hkrum sh...
The U.S Department of State, Bureau of East Asian ...
Makam masham Nu ku Hpung hpe hkrai n htai lai ga.
HPAJI DAW CHYE AI LAW NGA YANG, LAWT PRU SHARA NGA...
ဆန္ဒပြပွဲမှာ မွန်ပြည်နယ်က ကရင်နဲ့ ပအိုဝ်း တိုင်းရင်...
မတ်လ ဟာ ကျမအတွက် ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကို သိသာထင်ရှား...
ချောင်းဆုံနဲ့ မော်လမြိုင်မြို့ကို သွယ်တန်းထားသော တ...
American Mungdanean hte Baw sang ni kade du sai ...
US မှာ နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် သိနားလည်အပ်...
KIA က မြန်​မာနိင်​ငံ လုံခြုံ​ရေး ကို တာဝန်​ယူ​တော့...
KIA ကို အနိင်​တိုကိရန်​ မဖြစ်​နိင်​ဟု ကချင်​ပြည်​န...
Kachin Sub-State Byin Pru Wa Ai Lam
ledo lam Miwa ni Kattaya, concrete hte galaw wa sa...
Hugawng hkaimu nhtoi hpe jauman buga masha ni hte ...
တောင်သူလယ်သမားနေ့တွင် ဟူးကောင်း Mungchying Rawt Ja...
ဟူးကောင်းဒေသ ၀ါရာဇွပ်ကျေးရွာတွင် Mungchying Rawt J...
MungdanaHpu shawng hpuba Ning baw ningla ni Jing...
"Ruthless repression of the masses by the armed mi...
Gen. Aung San's vision of pluralistic society. A b...